Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : ခံစားမိသော စစ်တေးသံကဗျာတစ်ပုဒ် - ဂျူ နီယာဝင်း
Colorful People's Place
Junior Win's English
ခံစားမိသော စစ်တေးသံကဗျာတစ်ပုဒ် - ဂျူ နီယာဝင်း
(အမှတ် ၁၆၂၊ ၂ဝဝ၃၊ ဇူလိုင်)
Robert Southey (၁၇၇၄-၁၈၄၃) ရေးသားသောAfter Blenheim အမည်ရှိ ကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၇ဝ၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောBlenheim စစ်ပွဲကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် သြစတြေးလျားတို့က ပြင်သစ်တို့တိုက်သော စစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ် Duke of Mar; Borough, John Churchill (၁၆၅ဝ-၁၇၂၂) နှင့် သြစတြေးလျားမင်းသား Egene (၁၆၆၃-၁၇၃၆) တို့ကို သိထားဖို့လိုပေသည်။
စစ်ဟူသည် ဘယ်စစ်မှ မကောင်းပါကွယ်ဟု ကဗျာဆရာက ဆိုချင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့Blenheim စစ်ကတော့ ဖြစ်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ သမိုင်း မှာလည်း ကြီးကျယ်သော တိုက်ပွဲကြီးအဖြစ် ကမ္ပည်းတင်ခဲ့ပါပြီ။ ကြီးကျယ်သော၊ အောင်ပွဲအကြီးအကျယ်ရလိုက်သော၊ နာမည်ကျော်လှသော စစ်ပွဲတစ်ခုဟု ကဗျာဆရာက ဆိုပါသည်။ သို့ပေမယ့် ထိုစကားလုံးတွေ၏ နောက်ကွယ်က အဖြစ်သနစ်တွေ၊ ငိုကြွေးသံတွေကို ကဗျာထဲက ကြားလိုက်ရပါ၏။
ကဗျာ၏ ခေါင်းစဉ်အရ Belmheimစစ်အပြီးမှာ စစ်အပြီးကာလ နောက်ပိုင်း ၁ နှစ်အတွင်းမှာ၊ ၅ နှစ်လောက်မှာ၊ ၁ဝ နှစ်အကြာ မှာ၊ နှစ် ၁ဝဝ အကြာမှာ၊ နှစ် ၁ဝဝဝ လောက်မှာဟု တစ်ချိန်ချိန်ကို မှန်းဆကြည့်လိုက်ပါ။
IT wasasummer evening,
Old Kaspar’s work was done,
And he before his cottage door
ကဗျာဆရာသည် အေးဆေးတည်ငြိမ်လျက်ရှိသော အခြေအနေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းသော အဖြစ်တို့ကို ဤသို့ ရေးဖွဲ့လေသည်။ ထိုသို့ အေးဆေးနေလျှင်တော့ တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်တော့မှာပဲဟု ကဗျာဖတ်သူက တွေးမိပေသည်။ ကဗျာခေါင်းစဉ်ကလည်း Blenheim ဘလန်ဟန်း စစ်ပွဲအပြီးမှာ' ဆိုတော့ ဘာများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်ဟု သိချင်လာလေသည်။
ကဗျာဖတ်သူသည် ကလေးငယ်နှင့် အပြိုင်ပင် ထိုအရာကို စိတ်ဝင်စားလာသည်။ ဘာများပါလိမ့်ဟု တွေးမိလာ၏။
Roll something large and round
Which he beside the rivulet
He came to ask what he had found
That was so large and smooth and round.
ဘိုးဘိုး ကက်စ်ပါက မြေးငယ်ကလေး လက်ထဲက အရာကို ယူလိုက်သည်။ ကလေးငယ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့်နှင့် သူ့နံဘေး မှာ မတ်တတ်ရပ်ကြည့်နေလေသည်။ အဘိုးအိုက သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီး ခေါင်းကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းခါသည်။ နံဘေးမှာ မျှော်လင့်တကြီး ဘိုးဘိုးရဲ့ အဖြေကို စောင့်မျှော်နေကြသော မြေးမောင်နှမကိုတော့ဖြင့် ဘိုးဘိုးအဖြေပေးရတော့မည်။
သူက ကြီးကျယ်တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခု
Old Kaspar took it from the boy
And withanatural sigh
‘’Tis some poor fellow’s skull,’ said he.
‘Who fell in the great victory.
ကဗျာဖတ်သူဟာ နည်းနည်းတော့ ရိပ်မိလာပါပြီ။ ကြီးကျယ်လှတဲ့ စစ်ပွဲတစ်ခုမှာ စတေးခဲ့ရတဲ့ အသက်တစ်ချောင်း ဖြစ်ရပေမည်။ ဒီတိုက်ပွဲကလည်း ဘလန်ဟန်း တိုက်ပွဲကို ပြောတာဖြစ်ရမည်ဟု စတင် သဘောပေါက်လာရပါသည်။ ဘိုးဘိုးက ဆက်ပြောလေသည်။
အဲဒီမှာ ဒါမျိုး တစ်ခုမကပါ၊
‘I find them in the garden,
For there’s many here about;
And often when I go to plough
The ploughshare turns them out.
For many thousand men,’ said he,
‘Were slain in that great victory.’
ဒီလိုဆိုလိုက်လေလျှင် မြေးငယ်သည် သိချင်စိတ် ပြင်းပြလာလေသည်။ သူ့မြေးမလေး ဝီလန်မင်းပင် ဘိုးဘိုးကက်စ်ပါကို သူ့မျက်လုံး ကြီးများဖြင့် စူးစိုက်ကြည့်နေလေသည်။
‘Now tell us what ’twas all about,’
Young Peterkin he cries;
And little Wilhelmine looks up
With wonder-waiting eyes;
‘Now tell us all about the war,
And what they fought each other for.’
ဘိုးဘိုးကက်စ်ပါသည် ထိုဘလန်ဟန်းစစ်ပွဲအကြောင်းကို ရှင်းပြလေသည်။ သို့သော် သူတို့ ဘာအတွက် တိုက်ကြတာလဲဟူသော မြေးငယ်၏ မေးခွန်းကိုတော့ မဖြေနိုင်ပေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီတိုက်ပွဲဟာဖြင့်ရင် တကယ့်ကို အောင်မြင်တဲ့ တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲလို့ လူတွေ ပြောစမှတ် ပြုကြကြောင်းကိုတော့ ဘိုးဘိုးက ပြောနိုင်လေသည်။ အဲဒီတုန်းကပေါ့၊ ဘိုးဘိုးရဲ့ အဖေ မင်းတို့ကလေးတွေရဲ့ အဘိုးက ဘလန်ဟန်းမြို့မှာ နေခဲ့တာဟု ဆိုပါသည်။ သူရဲ့အိမ်တွေလည်း ပြာကျ၊ သူ့မိသားစုနဲ့အတူ ထွက်ပြေးကြရရှာတယ်ဟု ဘိုးဘိုးက ရှင်းပြလေသည်။
‘With fire and sword the country round
And manyachilding mother then
And newborn baby died:
စစ်ပွဲကြီး ပြီးသွားတဲ့အခါ တွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းဟာဖြင့် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာပါပဲလေဟု ဘိုးဘိုးက ဆက်ပြောလေသည်။ ပူပြင်း လှတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ အသက်မဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေ ထောင်ချီပြီး လဲပြိုနေလိုက်ကြတာတဲ့။ 'ဒါပေမဲ့ကွယ်၊ ကြီးကျယ်တဲ့ စစ်ပွဲတွေတိုင်းမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ကြပျက်ကြတာပဲကွယ့်'ဟု ဘိုးဘိုးက ဆိုလေသည်။
အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Juke of Marlboro ၏ အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုသံတွေက ဟိန်းလို့၊ ဘိုးဘိုးတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ မင်းသား Eugene ကို ချီးကျူးသံတွေကလည်း ပဲ့တင်ထပ်လို့ပေါ့ကွယ်ဟု ဘိုးဘိုးက ဆက်ပြောလေသည်။ ထိုနေရာအရောက်မှာတော့ မြေးမကလေး ဝီလန်မင်းက စကားဖြတ်မေးလိုက်လေ၏။
''နေပါဦး ဘိုးဘိုးရယ်၊ ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းနိုင်ပါ့မလဲ''
''အိုး ... ဒီလို မပြောနဲ့လေ မြေးကလေးရဲ့'' ဘိုးဘိုးက ပြောတယ်။
‘’twasavery wicked thing!’
Said little Wilhelmine;
‘Nay . . nay . . my little girl,’ quoth he,
‘It wasafamous victory.
သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှု တိုက်ပွဲဟာဖြင့် ဘာနဲ့မှ နှိုင်းမရဘူး။ ဒီတော့ လူတိုင်းက ချီးကျူးထောမနာ ပြုကြတာပေါ့ဟု ဘိုးဘိုးက ရှင်းပြပေမယ့် မြေးကလေးပီတာကင်က အခုလို ဆိုပြန်လေသည်။
'ဒါပေမဲ့ ဒါက ကြီးကျယ်တဲ့ အောင်ပွဲလေကွယ်''
‘But what good came of it at last?’
Quoth little Peterkin:—
‘Why that I cannot tell,’ said he,
‘But ’twasafamous victory.’
စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဟာဖြင့် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့လေပြီ။ ထို၏နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာကို မသိချင်ပါ။ သို့သော် စပ်စုတတ်သော ကလေးငယ်ကြောင့် အဟောင်းတို့အသစ်ဖြစ်ကာ ဘိုးဘိုးခမျာ ပြန်ပြောရရှာလေသည်။ ကလေးပီပီ အမေးအမြန်းထူထူ၊ အသိညဏ် ငယ်ငယ်ဖြင့် မေးသမျှ ကြံဖန်ဖြေနေရသော ဘိုးဘိုးကက်စ်ပါကို ကရုဏာသက်မိရပါသည်။ သို့ရာတွင် အပြစ်ကင်းသော ကလေး ငယ်ဖြစ်သောကြောင့် သူ၏ စပ်စုတတ်သော သဘာဝကိုဖြင့် ကျွန်မတို့ သဘောကျမိရပါတော့သည်။
Posted by Junior Win at 6:36 AM
ကလေးတို့၏အတွေးစိတ်ကူးများ - ဂျူ နီယာဝင်း
အတွေးအမြင် (၁၅၈)၊ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် ကလေးတို့၏ အတွေးများ၊ စိတ်ကူးများကား စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပေသည်။ ကလေးတို့သည် ပွင့်လင်းရိုးသားသည်ဟု ဆြို...
Burma Cartoonist U Ba Gyan
အလင်္ကာ ကျော်စွာကာတွန်းဝိဇ္ဇာဦးဘဂျမ်း(၁၉၀၂-၁၉၅၃) ကာတွန်းဆရာကြီးဦးဘဂျမ်း ၏အသက် ၁၀၆ နှစ်ပြည့်သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ နှင့် ကွယ်လွန်ခြ...
Book Review-Everyday Expressions in English
U Khin Maung Latt (MA) – Everyday Expressions in English ရန်အောင်စာပေ ပထမအကြိမ် ။ ၂၀၁၅ မေလ အုပ်ရေ ၁၀၀၀။ တန်ဖုိုး – ၃၀၀၀ကျပ် ထု...
ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းစာဆရာရေးတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်
ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းစာဆရာရေးတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် (အတွေးအမြင် အမှတ် ၃၀၉ မေလ ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ မေ ၂၊ ၂၀၁၈ (James Glen Stovall (ဂျိမ်းစ် ဂလ...
ဆိုကရေးတီး၏ သွားရာလမ်း - ဂျူနီယာဝင်း
(အမှတ် ၁၈ဝ အတွေးမြင်) ဒဿနပညာရှင်ဆိုတာ ပညာကို ချစ်မြတ်နိုး သူတွေလို့ဆိုတယ်။ အဲဒီစကားကို ပြောသူက ဆိုကရေးတီးပါ။ Socrates (၄...
Book Advertisement – Dr Khin Maung Win
စာအုပ်အမည် - လေ့လာစရာသင်္ချာ A to Z ရေးသူ - ဘာသာပြန် - ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း မူရင်း - Oxford Children A to Z (David Glover) ဖွင့်ဆိုချ...
Book Advertisement – Newspaper World
စာအုပ်အမည် - သတင်းစာလောက ရေးသူ - ဒေါ်ခင်မျိူးချစ် ပထမအကြိမ် - ၁၉၅၂ သြဂုတ်လ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း ဒုတိယအကြိမ် ...
Burma Writer - Thaw Dar Swe
Burma writer - Thaw Dar Swe သော်တာဆွေ (၁၉၁၉-၁၉၉၅) ဆရာဦးသော်တာဆွေကို ၁၉၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ပေါင်းတည် မြို့အပိုင်...
သိခြင်း - Junior Win
--> အတွေးအမြင် (၁၃၆)၊ ၁၉၉၈ ဒီဇင်ဘာ 'အင်္ဂလိပ်စာလုံး တစ်လုံးကို သိသလားလို့ မေးရင် အဲဒီစာလုံးတစ်လုံးရဲ့ tense တွေ၊ partsof...
Fuzzy Logic Daniel Mc Neill, Paul Freiberger first published - 1994 Fuzzy ဟူသောဝေါဟာကရကိုမပြတ်သားသော၊မရှင်းလင်းသော၊မှူန်ဝါးဝါးမရေမရာ...
Book Shelf (100)
Cartoon Box (5)
Letters from Readers (1)
Special Issue (4)
Harvest Festivsl in Three Pagodas Monastert and Ar...
ယုံကြည်ချက်အတွက်အနစ်နာခံခြင်း Junior Win
ကြွေပါသော်လည်း... - ဂျူနီယာဝင်း
Junior Win's ပျော်တော့ ပျော်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့
တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေ - ဂျူနီယာဝင်း
ကနေဒီအမှတ်တရ - ဂျူနီယာဝင်း
အဆိုးအကောင်း - ဂျူနီယာဝင်း
ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသူများ - ဂျူနီယာဝင်း
ဘဝစာမျက်နှာ - ဂျူနီယာဝင်း
နေ့သစ် တစ်နေ့ - ဂျူနီယာဝင်း
ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ - ဂျူနီယာဝင်း
ကမ္ဘာကျော် စကားများ - ဂျူနီယာဝင်း
ဖြူစင်သော နှလုံးသားပိုင်ရှင် - ဂျူနီယာဝင်း
ပင်လယ်ပြင်ထဲက ဘဝတစ်ခု - ဂျူနီယာဝင်း
တယ်လီဖုန်းတီထွင်သူ ဘယ်သူလဲ - ဂျူနီယာဝင်း
လူးဝစ်ကာရိုးလ်ရဲ့ အဲလစ် - ဂျူနီယာဝင်း
ရိုးရိုး လွယ်လွယ်နှင့် အဓိပ္ပာယ် လေးနက်ခြင်း - ဂျူန...
အရင်ဦးဆုံးအဖြစ်များ - ဂျူနီယာဝင်း
တိုင်းပြည်ကို ချစ်ဖို့ပြောသူ - ဂျူနီယာဝင်း
ဦးနှောက်၏ အစွမ်းများ - ဂျူနီယာဝင်း
ကဗျာကို ဖွင့်ဆိုသော ကဗျာဆရာ - ဂျူနီယာဝင်း
လွဲမှားခဲ့သော အနာဂတ်တွက်ကိန်းများ - ဂျူနီယာဝင်း
ကြောက်လန့်စေသော အရာများ - ဂျူနီယာဝင်း
ခံစားမိသော ကဗျာအပိုင်းအစများ - ဂျူ နီယာဝင်း
ကဗျာဆရာနှင့်ကဗျာ - ဂျူ နီယာဝင်း
ကွန်ပြူတာခေတ်ကို ရောက်ပြီလော - ဂျူ နီယာဝင်း
မေတ္တာရှင်၊ဂရုဏာရှင်ဖလောရင့်နိုက်တင်းဂေး - ဂျူ နီယာ...
ဘဘကြီးကိုလွမ်းပါသည် - ဂျူ နီယာဝင်း
ဘာသာပြန်ခြင်း - ဂျူ နီယာဝင်း
မေမေကြီးကိုလွမ်းပါသည် - Junior Win
ခံစားမိသော ကဗျာများ - Junior Win
နာမည်ကျော် ဂီတပညာရှင်ကြီးများ၏ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း -...
ဒါဖြင့်ရင်… ချစ်လို့လား ဂျူနီယာဝင်း
ပညာရှာခြင်း - Junior Win
ကဗျာများကိုခံစားခြင်း - Junior Win
သတ္တိရှိခြင်း - Junior Win
ခေတ်တစ်ခေတ်၏ ပုံရိပ်များ - Junior Win
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ခြင်း - Junior Win
အဆိုးထဲက အကာင်း - Junior Win
ကိုးရစ်အကြောင်း - Junor Win
ယုံကြည်ချက် - Junior Win
ထိုက်တန်အောင်ကြိုးစားခြင်း - Junior Win
ကျွန်မ လျောက်ခဲ့ရသောပညာရေး လှေကားထစ်များ - Junior ...
ထူးခြားထင်ရှားသူတို့၏ အတွေးအခေါ်များ - Junior Win
လွယ်မယောင်နှင့် ခက်သော အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ - Juni...
ထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းပိုင်ရှင်များ - Junior W...
တွေးမိသောအတွေးများ - Junior Win
အသိပညာ - Junior Win
ကိုးရစ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူများ - Junior Win
Home-made Traditional Shan Food (Video)
Phan Mee Ain - Literature Lovers